Amazwana ku PrivalSystems
PrivalSystems software ehlobene
Ithuluzi lokwenza izwi kanye video ubiza emhlabeni wonke. Uhlelo ikuvumela ukuba wenze izingcingo ku-Mobiles kanye landlines.
Skype 8.25.0.5 futhi 7.41.0.101
Lesi isithunywa senkampani enezingxoxo eziqanjiwe, usesho oluphambili lwemiyalezo noma amafayela nokuhlanganiswa nezinsizakalo zangaphandle.
Isofthiwe ukuzwakalisa futhi umbhalo ukuxhumana nabanye abasebenzisi. Isofthiwe kwenza ukusetha iphasiwedi ukufinyelela ukuxoxa futhi ulungiselele ibhokisi lengxoxo izidingo umsebenzisi.
Isofthiwe ukushintshanisa imiyalezo nge abasebenzisi nezinye amaklayenti chat. Futhi isekela ikhono kanyekanye ukuxhuma kumanethiwekhi amaningi for imiyalezo.
Ithuluzi Functional ngokuxhumana izwi. Isofthiwe ngokuzenzakalelayo kwandisa ngokucacile umsindo futhi ususa umsindo, ukuhlinzeka eliphezulu yokuxhumana.
Isofthiwe kwakha slideshows professional kanye eliphezulu. Futhi isekela eziningi abezindaba izakhiwo kanye nemiphumela ehlukahlukene sokuqhafaza noma umsindo.
Ukuzijabulisa abanye, Emulators yemidlalo